ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: Prison Break
ရေးပြီးချိန်: 9/20/2008 01:41:00 AM
ဒီတခါလည်း အမေ စာအုပ်မျိုးစုံကို ဆာလာအိတ်ကြီးနဲ့ သယ်လာပြန်တယ်။ အဲဒီတော့ စာအုပ်တွေကလည်း ဖတ်ဖို့ အများကြီး ဖြစ်နေရော။ ဟိုစာအုပ်လည်း ဖတ်ချင်၊....
wondering in your place, books shortage much more than Burma? and your mum helped you out to read books. but I don't think you are in Siberia. Amazing mother's love :)
အမေက စာအရမ်း ဖတ်လွန်းလို့ပါ။ ဖတ်စရာ စာအုပ်မရှိရင် သူက နေလို့ မရဘူး။ city hall မှာ သွားပြေးဝယ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာကလည်း ဈေးကြီးတယ်လေ။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်ပြန်ရင် သယ်သယ်လာတာပဲ။ ကျွန်မတို့အိမ်မှာ စာအုပ်တွေကို ဘီရိုတွေ၊ ခြင်းတွေနဲ့ အပြည့်ထည့်ထားရတတ်တယ်။:D
စာတွေအရမ်းဖတ်တဲ့ အမေကရော ဘလော့ဂ်မရေးဘူးလား။ Prison Break ကို ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲ ဆိုတာလေးပါ ထည့်ရေးပြစေချင်တယ်။ ကောင်းတယ်ဆို ဒီကလည်း အားပေးချင်လို့...
prinson break က ကျွန်တော့်ရဲ့ one of my favourites ပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါတစ်ခါကြည့်ရင် ခေါင်းမူးအောင်ကို အစအဆုံးကြည့်ဖြစ်တယ်။ season မှာက နည်းနည်းပျင်းစရာကောင်းသွားပြီး၊ season3မှာ ပြန်ကောင်းလာတယ်။ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကြည့် ကြည့်ရင်သဘောပေါက်မှာပါ။
season2ရေးတာ2ကျန်ခဲ့လို့ပါ။ ဟဲဟဲ။
ကိုသက်ဦး... အဲဒီကားက ထောင်ဖောက်ပြေးတဲ့အကြောင်းလေ။ ကိုlonetone ပြောသလိုပဲ ကြည့်ကြည့်ပါ။ တော်တော် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ အသက်ရဲရဲမရှူနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
ဟုတ်ကဲ့။ ကိုlonetone, season3ကို DVD ရမှပဲ အေးဆေးကြည့်တော့မယ်ဆိုပြိး အကုန်တောင် မကြည့်ရသေးဘူး။
ကြည့်နေပြီ။ ကြည့်နေပြီ။ မနေ့ညက Season 1 အပိုင်း (၅) ကိုကြည့်တယ်။ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်။ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကိုသက်ဦး။ ဆက်ကြည့်။ သဘောကျသွားမယ်။ ;)
မင်္ဂလာပါ မ sowha1
ဒီကားကို ကျွန်နော် ကြိုက်တယ်။ ဒီမှာက မနက် ၃း၀၀ နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လာတယ်။ အခန်းဆက် ပေါ့။ အိပ်ပျက်ခံပြီး ကြည့်နေတယ်။ အခုလို လခ့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး။
ကိုလူလှ... season3ထိကြည့်ပြီးသွားပြီ။ ဟိုနေ့ကမှ ခွေဝယ်ကြည့်တာ။ ၄ တော့ မကြည့်ရသေး။